Wax Ka Baro Shaqada Guddiga Arrimaha Gudaha, Amniga Iyo Federaalka Ee Golaha Shacabka – Kalfadhi
Arrimaha muhiimka ah ee guddiga horyaalla
Soomaaliya waxay qaadatay in dalka lagu maamulo nidaamka Fedraalka, ilaa iyo hadda waxa suurtogalay in la dhiso Baarlamaanka Federaalka oo laba aqal ah iyo in dowlad gobolleedyada xubin ka noqonaya federaalka Soomaaliya, hayeeshee waxaa wali harsan in la dhammeystiro arrimaha ka dhimman qaab dhismeedka dowlad gobolleedyada, oo ay ka mid yihiin astaameynta soohdimaha u dhaxeeya dowlad goboleedyada, dhismaha goloyaasha maamulka dowladaha hoose iyo doorasho loo simanyahay ee qof iyo cod oo la filayo in la qabto dhammaadka sanadka 2020-ka iyo in la dajiyo shuruucda lagama maarmaanka u ah oo ay ka mid yihiin sharciga jinsiyadda Jamhuuriyadda Federaallka ee Soomaaliya, sharciga doorashooyinka iyo maqaamka Mogadishu oo go’aan laga gaaro iyo kuwa kale.
Haddaba si midnimada dalka loo sugo, xiriirka dowladda federaalka iyo kan maamul gobolleedyada uu u noqdo mid ku dhisan walaaltinimo, isu duwidda howlaha qaranka u fududaato, waxaa lagama maarmaan ah inaan u hawlgalno dhisidda hey’adda u xilsaaran isku xirka xukuumadaha si waafaqasan 111F ee Dastuurka iyo nidaamka xiriirinta iskaashiga xukuumadaha si waafaqsan qodobka 51 (5). Xagga amniga qaranka waxaa xusid mudan in shuruucda ay ku dhisanyihiin hey’adeenna amniga qaranka u baahanyihiin dib u eegis maadaama shuruucdaas jiristoda waqti badan kasoo wareegay loona baahanyahay in la waafajiyo nidaamka federaalka iyo duruufaha gaarka ah ee dalku ku suganyahay. Waxaa iyana muhiim ah in loo howlgalo in si wax ku looga qaban qaxootiga ku sugan dalal shisheeye kuwan oo lagama maarmaan u ah in guddigu siiyo mudnaanta koowaad.
Howlaha Loobaahanyahay in Guddigan Diiradda Saaro
In hindisayaasha sharci guddigu horyaal uu ka sameeyo dhageysi dadweyne, lagana qayb galiyo hay’adaha dan iyo dawrba ku leh.
In uu abaabulo cilmi-baarisyo kala duwan, kuna sameeyo sida ugu wanaagsan ee uu caalamku uu dhaqmo shuruucda iyo hawlaha xilalka guddigan loo igmaday.
In uu darso hawlaha xil ahaan ugu abbaaran ee ku xusan qorshaha horumarinta qaranka 3-da sano.
In uu fuliyo korjoogteynta howlaha ay fulinayaan wasaaradaha, guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka, guddiga xuduudaha iyo arrimaha Fedraalka iyo hay’adaha kale ee dowladda oo guddiga xil ahaan ugu abbaaran.
In uu si muddeysan golaha ugu soo diyaariyo warbixinno hawlgallada guddiga si kulanka guud ee goluhu ugu doodo unu jiheeyo.
In uu korjoogteeyo hawlgalka guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka.
La xiriirridda iyo xog-siinta Baarlamaannada dowlad gobolleedyada.
Dabagalka dhaqangelinta shuruucda arrimaha gudaha iyo amniga ee horay uu u soo saaray Baarlamaankii 9aad.
Xigasho: Buugga qorshe-hawleedka guddiyada Golaha Shacabka, 2017.
Todbobaadkan oo uu Kulankii 2-aad ee Golaha Shacabku baaqanayo